कस्तो पापी छोरो! ब’ञ्च’रो र ढु’ङ्गाले हा’नेर आफ्नै आमाकाे ह’त्या! – PathivaraOnline
Home > समाज > कस्तो पापी छोरो! ब’ञ्च’रो र ढु’ङ्गाले हा’नेर आफ्नै आमाकाे ह’त्या!
एजेन्सी । मान्छेले क्षणिक संवेग बसमा राख्न नसक्दा ठूला अप’रा’ध गर्ने गर्छन् । उनीहरुलाई जीवनभर पछुतो हुने भएपनि रिसको आवेगमा उनीहरु यस्तो निर्णयमा पुग्ने गर्दछन् । झापामा यस्तै एक घटना भएको छ । र’क्सीले मा’तेका एक युवकले आफनै आमाको ह’त्या गरेका छन् । यो घटना आइतबार राति को हो । मा’त्ति’एर ह’ल्लिदै आएका छोरालाई आमाले सम्झाउन खोजिन् । आमाले सम्झाएको छोरालाई मन परेन र ज्यान नै लिए । – सम्बन्धित समाचारका भिडियो हेर्नु तल क्लिक गर्नुहाेस ***
आफ्नै आमाको ज्यान लिने ब्यक्ति ८ बजे कमल गाउँपालिका ८ ठुलो बाह्रघरेका दिनेश ऋषिदेव हुन् । आफ्नै आमाको ज्यान लिने दिनेश २४ वर्षिय रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ । र’क्सीले मा’तेका ऋषिदेवले ५० वर्षिया मीरा ऋषिदेवको ज्यान लिएका हुन् । उनले हि’र्का’एर आमाको ज्यान लिएको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनले सास रहुन्जेल ब’न्च’रो र ढुं’गाले हा’नेर घट्ना स्थलमा नै ज्यान लिएको जिल्लाका डिएसपी राकेश थापाले जानकारी दिए । घटना थाहा पाएर स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालय दमकबाट गएको प्रहरी टोलीले आफ्नै आमाको ज्यान लिने दिनेशलाइ समा’तेर अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
५० प्रतिशत भाडा बढ्यो, लामो दुरीको यातायात र आन्तरिक जहाज सुचारू हुने!
सरकारले लामो दुरीको यातायात र आन्तरिक हवाई उडान पनि असोज १ गतेदेखि नै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमवार बसकेो मन्त्रीपरिषद बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्दै यातायात र आन्तरिक हवाई सेवा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो । असोज १ गते देखि संचालन हुने बस व्यवसायीले साविकको भाडादरमा ५० प्रतिशत बढाएर लिन सक्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । साथै कोरोनाको जोखिम बढेको अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले आवश्यक निर्णय लिन सक्नेछ । बसको एक लहरको सिटमा एक जना मात्र बस्न पाइनेछ ।
सरकारले अन्तरिक हवाई उडान र होटल रेष्टुरेन्टहरु पनि असोज १ गतेबाटै खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्दै अन्तरिक हवाई उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । विमानमा सिट क्षमताको आधा मात्र यात्रु राख्नुपर्नेछ भने मास्क, भाइजर अनिवार्य गरिएको छ । – समाचारहरूकाे भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस्